Wholesale Fluffing Silicone emulsion Fekitori uye Pricelist | Honneur
Kufuridzira Silicone emulsion PR160
Shandisa: Fluffing Silicone emulsion PR160 yakakosha organic silicone emulsion uye yakakosha zvinhu zvakasviba zveiyo yakagadzirirwa system KusimudzaMumiriri wejira rakarukwa. Inogona kushandiswaKusimudza, Kuveura & Kusimudza kupedzisa kwekotoni, T / C, polyester, nylon uye machira ayo akasanganiswa. inopa chigadzirwa chakatsiga, chakapfava, chakatsiga uye chakavanzika kumuti wakasimudzwa. Iyo inogona kushandiswa pamwe chete neFlake emulsion mune zvakasiyana zvakasiyana zvichienderana nemamiriro emucheka.
Mucheka wakasukwa unogadzirwa kuburikidza nehurongwa hwekupeta, zvakare hunonzi kusimudza kana kutsikisa. Kumusoro kwejira rakarukwa kana mucheka wakarukwa unobatwa nemabhuruku kugadzira manyoro, asina kupfava. Mienzaniso inozivikanwa inosanganisira flannel, moleskin, uye polar fleece.
Yakagadzirwa ganda nekupukuta polyester machira iyo inokonzeresa kuwanda uye kusimudzira emhepo muhomwe zvekuisa. Rume rinopa hukuru hwekushisa-kusvika-kurema huremu kana zvichienzaniswa ne Merino mvere asi rakaderera kusvika goose pasi kana kugadzirwa kwezvinhu zvakagadzirwa.
Kubata mabwe chiitiko icho chinogona kuiswa pamakonzo, makotoni, spun silika, uye spun rayons, kusanganisira zvese zvakarukwa uye zvakarukwa, kusimudza velvety, nyoro pasi. Maitiro acho anosanganisira kupfuudza mucheka pamusoro pemakona anotenderera akafukidzwa ne waya dzakanaka dzinosimudza pfupi, dzakasununguka mafambo, kazhinji kubva kumabhuru iwaya, kumusoro, nekugadzira nap. Maitiro acho, ayo anowedzera kudziya, anogara achiiswa pamabvudzi uye akanyanya uye zvakare mumagumbeze.
Chitarisiko: Milky chena mvura
PH Kukosha: 6 ~ 8
Solubility: inyunguduke mumvura
Hunhu uye Kunyorera:
1. Yakanaka nyoro, yakapfava, fluffy kunzwa maitiro, ita kuti mucheka uve nyore fluffing；
2. Iyo ine mashoma mashoma pane iyo mumvuri wemuvara, kuchena uye kukurumidza kwemavara
3. Mushure mekupedza, iyo yemukati yemucheka inotsvedza, plush kunyange, inowana dense, yunifomu murwi
4. Inogona kushandiswa nevakawanda vevasilicone nyoro uye mamwe machira anobatsira mune imwe yekugezera, zvakanyanya
inoshandiswa mukupedza maitiro
Kushandiswa uye Dosi:
Mune mudziyo, nyurura iyo flake nemvura inopisa uye inyungure zvizere. Zvadaro, wedzera Fluffing
Silicone Emulsion mune chikamu, chinomutsa icho pamwe uye chishandise mushure mekusefa
1. Polyester loop machira (Coral murwi uye polar fleece)
Asina simba cationic flake 25kg, wedzera PR160 anenge 50kg, akaomeswa kusvika 1000kg; Dosi: 40-50 g / l
2. Pamba yakarukwa machira
Asina simba cationic flake 40kg, wedzera PR160 anenge 70kg, akaomeswa kusvika 1000kg; Dosi: 40-50 g / l
3. T / C mucheka wakarukwa (80/20 kana 65/35)
Asina simba cationic flake 30kg, wedzera PR160 anenge 70kg, akaomeswa kusvika 1000kg; Dosi: 40-50 g / l
4. DTY (Dhizaina mavara ejira) mucheka wakarukwa
Asina simba cationic flake 25kg, wedzera PR160 nezve 50kg, wedzera block silicone emulsion 10-20kg,
dhata kusvika 1000kg; Dosi: 40-50 g / l;
Pamucheka wakasvibiswa, dzorera iyo isina kusimba flake neisiri-ionic flake
Ongorora: iyo data iri pamusoro ndeye yekurevera chete, maererano neicho chaicho chiitiko
Packaging: Inopihwa 200kg Drum kana 1000kg IBC
Hupenyu hwemashelufu hwakakwana mwedzi gumi nemaviri kubva pazuva rekugadzirwa uye yakachengetwa mune yepakutanga isina kuvhurika
mudziyo pa2℃~ 30℃. Ndokumbirawo utarise kune yakachengetedzwa kurudziro uye zuva rekupera musi
Yepfuura: D4 D5 D6 Mahara Mahara
Kuveura & Kusimuka kupedzisa Mumiriri; fluffing silicone emulison
Kugadzika Kuparadzira Mumiriri we polyester dhayeti
Kumiririra mumiriri weasidhi uye pre-metallized dyes